Xavi oo qirasho geesinimo leh sameeyay kaddib markii Barcelona laga cirib tiray tartanka Copa del Rey – Gool FM
Dajiye January 21, 2022
(Bilbao) 21 Jan 2022. Tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi ayaa qirtay in Athletic Bilbao ay u qalantay inay u soo baxdo wareega siddeeda ee tartanka Copa del Rey, kaddib markii laga adkaatay naadiga reer Catalonia.
Athletic Bilbao ayaa u gudubtay wareega siddeeda ee Copa del Rey kaddib markii ay kaga adkaatay 3-2 kooxda Barcelona oo marti ugu ahayd garoonka San Mamés, kulankii wareega 16-ka ee tartankan.
Ciyaarta kaddib Xavi Hernández ayaa wuxuu la hadlay warbaahinta, sida laga soo xigtay wargeyska Marca ee dalka Spain, wuxuuna yiri:
“Barcelona waxay isku dayday in ay badiso balse Athletic Bilbao ayaa ahayd mid xoogan.”
“Waxay ahayd inaan guuleysano kulankan, balse Athletic Bilbao waxay ahayd mid wanaagsan oo habaysan, waxaana qabaa inay ciyaareen ciyaar weyn.”
“Waan isku daynay, laakiin si adag ayay u difaacdeen, waxay ahaayeen kuwo ka sarreeya halganka laba geesoodka ah, waxaan u helay koox adag Bilbao, waxaanu dagaalanay ilaa dhamaadkii.”
“Hadda waan ka harnay tartanka, waana maalmo adag, laakiin ma jirto doorasho kale oo aan ka ahayn inaan shaqeyno oo aan rumaysno, Waa inaan nafsiyan uga soo kabanaa guul-darradii Supe Spanish Super Cup iyo guuldarradan, laakiin waa inaan ka fikirnaa horyaalka gudaha iyo kan Europa League.”